980NM Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ihe na -emepụta igwe na -ebugharị Laser Spider Vein - China 980NM Laser Spider Vein Removal Machine Factory
Mwepu 3 Mfe Ogologo Diode Laser Iwepụ ntutu ...
Igwe mwepụ akwara Laser na -enweghị mgbu, akụrụngwa mma ihu ihu
Laser 980nm na -adụ akpụkpọ ahụ wee banye na arịa ọbara dị elu. Ọkụ nke sitere na laser na -agbakọ ọbara n'ime arịa na -eme ka ọ daa wee kaa akara. N'ime izu ole na ole sochirinụ, arịa ahụ ga -apụ n'anya ma mkpụrụ ndụ nke ahụ na -atụba ahụ ga -ewepụ ọbara niile. Usoro ọgwụgwọ ọhụụ nke laser na -enye ohere ibunye otu arịa ọbara n'ụzọ ọ bụla n'emebighị akụkụ ọ bụla dị nso.
Teknụzụ kachasị ọhụrụ enweghị oge CE kwadoro igwe mwepụ arịa ọbara diode vaskụla laser 980 nm ududo ududo mara mma
Ihe mgbu 980nm diode Laser Vein Removal Machine Portable Facial ududo vien mwepụ Ngwa mma
Laser 980nm na -adụ akpụkpọ ahụ wee banye n'ime arịa ọbara dị oke egwu. Okpomoku sitere na laser na -ejikọ ọbara n'ime arịa na -eme ka ọ daa wee kaa akara. N'ime izu ole na ole sochirinụ, arịa ahụ ga-apụ iche, mkpụrụ ndụ ahụ ga-ewepụkwa ọbara niile.
Igwe Ọkachamara Ududo Ududo Ọ dịghị Nsogbu Mgbu
2021 igwe na -ewepu akwara akwara 980nm kacha mma
980nm igwe mwepụ ududo
980nm laser spider vein mwepụ igwe